Iindaba - UkuQeda kweAluminiyam eyongezelelweyo kunye neeProfayili zeAluminiyam yokuKhulisa ii-FAQs
Umbuzo: Ziziphi iziqendu ze-aluminium extrusion ozinikezelayo?/ Zeziphi iindlela zokugqiba ialuminiyam ezikhoyo?
A: Sinikezela ngedyasi yamandla kunye nokugqitywa kwe-anodized ezibonelela ngokugqibeleleyo ukumelana nokuthotywa kwemibala eyahlukeneyo.Nokuba ujonge iimfuno ezisebenzayo okanye zobuhle, sinokukunceda ukufumanisa umgubo ofanelekileyo kwisicelo sakho.
Q: Uthini umahluko phakathi kwe-aluminiyam enodizisiweyo kunye ne-aluminiyam egqityiweyo yokusila?
A: I-aluminiyam egqityiweyo yokugaya ibhekiselele kwiimveliso ezikhutshiweyo ezingakhange zenziwe naluphi na unyango olungaphezulu.I-aluminiyam e-Anodized yi-aluminium egqityiweyo yokusila ehamba nge-anodization, eyinkqubo ye-electrochemical eyandisa ukuxhathisa ukubola, ukuqina kunye nokuhlobisa.
Q: Zeziphi iinketho zomatshini we-aluminium ezikhoyo?
A: Sinoomatshini abalishumi be-CNC, abanamandla omatshini othe nkqo kunye othe tye.Oomatshini bethu be-CNC abalishumi nabo banezakhono ze-4th-axis, ezisivumela ukuba sigubungele i-aluminium extrusions kwii-axes ezininzi ngaphandle kokutshintsha i-tooling, eyandisa imveliso.
Umbuzo: Ziziphi iindlela zokuhlola kunye nemigangatho oyilandelayo ukuqinisekisa umgangatho woyilo lwakho lwe-aluminium extrusion?
A: Siqinisekisa ukuba iindawo ezenziweyo zidibana neenkcukacha ezifunekayo ngokuhlolwa ngononophelo okubandakanya ukwenza igeyiji yesiko ukuqinisekisa ukufaneleka kunye nokusebenza kwenxalenye nganye xa kuyimfuneko.Sinikezela ngoluhlu olubanzi lweenkonzo ze-aluminium extrusion ngelixa sigcina i-ISO 9001: izatifikethi ze-2015 kuzo zonke iindawo zethu zokuvelisa.
Umbuzo: Ngaba ungandinceda ndiyile iprofayile entsha ye-aluminium?
A: Nokuba uza kuthi ngoshicilelo olupheleleyo lwemveliso okanye inxalenye yombono, sinokusebenza nawe ukufezekisa iimfuno zakho zoyilo olufanelekileyo.Ngoncedo loyilo oluncediswa yikhompyuter (CAD) kunye nemveliso encediswa yikhompyuter (CAM), sinokukunceda wenze iimfuno zakho zokwenza.
Umbuzo: Ngaba kukho umda wobungakanani kwiiprofayili ze-aluminium extrusion onokuthi uvelise?
A: Iinkonzo zethu ze-aluminiyam extrusion zivumela ubunzima-ngonyawo-uluhlu lwe-0.033 ukuya kwi-8 pounds kunye nobukhulu besangqa ukuya kwi-8 intshi.